Akubuzwa ukuthi akuvamile kunoma iyiphi indlu yezwe, cottage noma villa kukhona okugeza. Kuyinto elula kakhulu, futhi okubaluleke kakhulu, enempilo. Futhi lokho ikamelo ngaphandle amanzi ashisayo? I element okuyisisekelo ezifana imishini izakhiwo kuyinto ithangi okugeza insimbi engagqwali. Ukusetshenziswa insimbi engagqwali kungenxa kunezinzuzo eziningana:
- steel akusho adle, ngaleyo ndlela, amanzi ethangini kumelwe ahlanzeke, nokugqwala akuyona kwakhiwa. Welds wenziwa argon Welding;
- insimbi engagqwali is bangaveziwe emiphumeleni elimazayo lokushisa eliphezulu kanye nomswakama high ukusetshenziswa isikhathi eside.
Ngokuvamile okugeza ithangi ezenziwe ngensimbi engagqwali kwenziwa kusukela lezinsimbi ezinjalo - 08X17, 12X18H10. Sinenkosi okusezingeni eliphezulu ukushisa ukumelana futhi ukumelana ukusonteka ngaphansi lokushisa eliphezulu.
Kunezinhlobo eziningana amathangi, kuye ngokuthi indlela amalahle uketshezi:
- amanzi kuhhavini eshubile;
- amalahle nge booster kagesi esakhelwe ethangini.
Ukuze Ukushisa umfaniswano amanzi ethangini kanye eside ukushisa ukulondolozwa kubalulekile, ukushuba metal elinendawo ithangi okugeza insimbi engagqwali. Lapho amalahle ketshezi esithandweni sensimbi kuthathwe ukujiya mkhulu kunezinhliziyo lapho amalahle usebenzisa booster kagesi. Lokhu kungenxa ukuchayeka eliphezulu lokushiya lokushisa kubhayela. Nokho, okwandisa ukushuba we metal kuthinta isisindo ethangini, futhi kungakho izindleko zawo.
Bangaki abantu ngeke kanyekanye sathandwa futhi indlela Ukushisa kwamanzi kuncike inkulu kangakanani ithangi kuyadingeka ukuba okugeza ezenziwe ngensimbi engagqwali. Ukuze umuntu oyedwa umthamo okwanele kufika ku-50 amalitha.
Umkhakha ukhiqiza amathangi, zazo ogibele ipayipi flue isithando. I flue esele efakwe ethangini. Intuthu lapho sidlula tube heats odongeni ezithwala ukushisa yazo eya emanzini. Ngembobo engenhla ethangini egcwele amanzi, nkinga wenziwa ngokusebenzisa kufaneleka abakhwabanisi. amathangi Futhi iyatholakala sehlisiwe, zazo ogibele ngqo odongeni kuhhavini futhi sishiswa ngakho. Kulokhu, valve kungelula ngaso kanye phansi.
Ukufudumeza igumbi amahora ambalwa e zokugeza noma ama-sauna, heater kagesi asetshenziswa. Kulokhu, akukho isidingo Thenga kakhulu izinkuni. Zonke uzokwenza heater sauna ukuze ama-sauna. Teny kwamatshe ashisayo ezibekwe phezu kwabo.
Elektrokamenka ekhiqizwa ngokuvamile singunxande, nge Ukushisa Tenom ngaphakathi. Inhloso Its main - ukudala ikamelo umusi ashisayo, emoyeni elomile. On umzimba esithandweni ezinhlangothini ezintathu ngoba ngcono ukudluliswa ukushisa ekwenziweni amakhethini. Kulaba izinhlobo eziningi zala matshe incike ngokushesha kangakanani lifudumeza Igumbi umusi. Uma amatshe ukufudumala kakhulu ngizoya eside, kodwa imibhangqwana iyoba ngaphezulu "soft futhi aluhlaza."
Okusanda Ohhavini baye zande, wenza cast iron. Ziyakwazi okuhlala isikhathi eside futhi ukumelana imvelo bangaphandle.
Sakaza yensimbi isitofu ngokuba amabhati kunezinzuzo abanye phezu kwezinye heater:
- lula ukufakwa egumbini;
- akadingi udonga, okuyinto usindisa kokubili isikhathi nemali;
- kulula ukuthuthela kunoma iyiphi indawo.
Sakaza yensimbi isitofu ungakwazi ukufudumeza amandla endaweni encane enkulu. Ngaphezu kwalokho, it has yizinhlobonhlobo - heats namanzi, futhi umusi uqobo. Indaba ephezulu ukushisa ukumelana cast iron. Isici esivelele sesimiso amaziko onjena ulungise inqubo esithandweni. amahora Kufika eziyisishiyagalombili kancane amandla omlilo inqubo esithandweni we metal singenzeka.
Worktop for ekhishini ngezandla zakhe. Amatafula for ekhishini kusukela particleboard
Eyingozi kakhulu namazeze-moose?
Ukuvenisha BT-577: izici lobuchwepheshe, yokusetshenziswa, nomkhiqizi
Ukuqeqeshwa Functional. Kanjani ukwakha umzimba ephelele